PP Spunbond Isina-Yakarukwa Jira Vagadziri & Vatengesi | Rayson
Iyo yakakwana assortment yeakanakisa mhandoPP yakarukwa-yakasungwa isina-yakarukwa machira inopihwa nekambani yeRayson mumhando dzakasiyana uye zviyero. Isu takaveza niche seimwe yeakakurumbira PP akaruka-simbi isina-yakarukwa machira vagadziri muChina. Isu tinoshandisa yakanakisa mhando mbishi zvinhu uye zvazvino matekiniki ekugadzira PP isina rakarukwa machira. Iyi PP isina-yakarukwa machira ndiwo musanganiswa wakakwana wekusimba pasina mubvunzo, kupfava, uye simba rakanaka.
Polypropylene spunbond nonwoven orton yePocket Spring
PP Spunbond Notwoven mucheka zvinoreva polypropylene spun-bond isina kuchena machira, isimba rakanaka uye elongation. Izvo zvinyorwa zvakaringana zvechitubu chehomwe. Kurema kwemucheka kunobva ku60gran kusvika 80gr neyakagadzirirwa upamhi. Rayson asina mwero akachekwa anokupa iwe PP Spunbond isina kuchena mutengo mutengo, gamuchirwa kuti ubate isu.
Kubvuma kusava nemachira asina ruchimbo
Kubvuma kusava nemachira asina ruchengo.Iyo mhando mbiri. Iyo miviri yePC notwoven yakamanikidzwa nekotoni .other ndeye matatu PC notwoven yakamanikidzwa
Best PP Spunbond Asina Akarukwa Machira Ematongi Fekitori Mutengo -
Best pp spunbond isina ruchimbo yemitoro yemutengo fekitori mutengo -.Isu tiri mugadziri wePP Spunbond isina hunyanzvi machira ane anopfuura makore gumi nemana 'ruzivo. Iso, BV& SGS Scertified. Uye isu tiri kupa PP yakakurudzira nonwoven orcheni iwe zvakananga.Chigadzirwa chedu chinotora polypropylene zvinyorwa, kuburikidza nekunyungudika kwekunyungudika, kuseya, silk kusvetuka mumambure, uye glued inopisa, pakupedzisira ndakapfeka, pakupedzisira tenderera uye nekupukunyuka uye kutevedza otomatiki kuita rolls.Hunhu hwezvigadzirwa zvedu zvinovimbiswa uye kutumira kuri nenguva. Zvigadzirwa Zvikuru: Fenicha Isina Kugadzirwa / Kugadzira Bhegi Nonwoven / Kurima Kudzivirirwa uye Kurima Nonwoven / Medical Shandisa Iswaven / Tafura CloToth /. Zvichadaro.
High quality polypropylene isina ruchimbo geotextile machira
Polypropyle isina ruchimbo geotexiles havana ruzivo rwekupunzika-kwakaburitswa geotextivales yakagadzirwa ne 100% polypropylene machira. Iyo nonwovence polypropyle geotextile machira anoshandiswa akasiyana-siyana ekushandisa mumidziyo yemhoteredzo uye sekuvaka misika, yakadai yekuvaka mugwagwa, Landfill kupatsanurwa uye kudhonzwa uye kushomeka uye shiri dzimba dzekudonha.
Ratidza imba yeRayson isiri yakarukwa zvigadzirwa
Foshan Rayson Isina-Akarukwa Co, Ltd. Anogadzira mwaka mugadziri asina mwaka wemahara ane makore ane ruzivo. Izvo zvakazvipira kusiri-kwakarukwa musimboti wekutsvagisa, uye kugadzirwa uye kune gumi yepamberi midziyo yekugadzira midziyo, SS , Nekugadzira uremu kubva pa 100SG kusvika 150gsm mukati 4.2m yakafara, ine huwandu hwegore negore rekugadzira rinopfuura makumi matatu ematani. Iyo kambani inokwanisa kuburitsa madhiri asina mwero emhando dzakasiyana siyana uye saizi, yakakodzera kushandiswa kwakawanda kwakasiyana.
Pp spunbond isina ruchive geotextile
Isina ruchive geotextile Inoshandisa mukuvaka uye maindasitiri ekuvaka munguva dzese uye kugadzira mucherechedzo nekudzikisira pasi, achivandudza masaiti ekudonha uye kuparadzaniswa, kupatsanurana kwakaunganidzwa uye kupararira mitoro yakaiswa. Iyi isina ruchimbo geotexthile machira inogadzirwa nePolypropylene spunbond isina rakarukwa, kazhinji mune dema uye grey color. Iyo machira ndeye biodegardable, eco-ane hushamwari uye uv yakasimbiswa.
Zvigadzirwa Zvikuru zveRayson Kwete Kambani Yakarongeka
Foshan Rayson Isina-Akarukwa Co, Ltd. Anogadzira mwaka mugadziri asina mwaka wemahara ane makore ane ruzivo. Izvo zvakazvipira kusiri-kwakarukwa musimboti wekutsvagisa, uye kugadzirwa uye kune gumi yepamberi midziyo yekugadzira midziyo, SS , Nekugadzira uremu kubva pa 100SG kusvika 150gsm mukati 4.2m yakafara, ine huwandu hwegore negore rekugadzira rinopfuura makumi matatu ematani.
Pre-akacheka isina ruchimbo yemachira emidziyo
Rayson inyanzvi yefekitori iyo yave ichigadzira pp isina ruchimbo yemucheka kune inopfuura 14years.Pre-akatema asina ruchimbo ndechimwe chechigadzirwa chedu chinonyanya kushandiswa for fenicha, semateti uye sofa. Mutsara wekutapurika unoita kuti misodzi nyore. Inogona kuvandudza kugona kwekugadzirwa kwehusimbe. Pre-akatema asina ruchimbo yemachira emidziyo inotumirwa kunzvimbo yeUS uye European Market.
Kusona isina ruchimbo
Kusona isina ruchimboIyo beige yeruvara isina kuchena machira anoshandisa yeteti chifukidziro chinoita kuti maturu akakodzera.Saizi ndeye 2.1m kusvika 2.4m.Nguva dzose makumi matanhatu nenomwe kusvika ku1000grambeige, grey, dema uye chena ruvara.
Stitch yakasungirirwa PP Spunbond isiri yakarukwa machira ematress
Machira-ebushi asina mwero, imwe yemhando yePP Spun Bond isina mwero, yakagadzirwa nemuchina wekurwadziwa unobatanidza webhu, kana akabata nzvimbo yewebhu munzvimbo, neLeckitudinal yarns. PP SPUN BAD YEMAHARA YEMAHARA YEMAHARA ZVINOGONESESWA SEZVINOGONESESA SEZVINHU ZVINOGONESA KANA KUPEDZESA KANA KUTI ISANGANO YEMAHARA, Magumbeze, uye majaketi. Stitch yakasungirirwa PP isiri yakarukwa machira ndiyo zvinhu zvikuru zvekugadzira mattress. Iyo inoshandiswa semachira pazasi pemateti. Iyo isina-yakarukwa machira iri mune 70gr kusvika 100gr mumavara akasiyana. Rayson ndiye akanakisa PP Spun-Bond isina-yakarukwa yemucheka mugadziri. Tikugashirei kubvunza.
Yakarwiswa isina ruchimbo yemucheka webhokisi rechirimo
Isu tine chengetedza dambudziko parakaburitsa muhomwe yemuchero paine ruzha rukuru. Yakapindirwa neDOT YOVENY FABC inogona kuponesa dambudziko rese renzwi kana raisa maturu, sofa uye imwe fenicha. Iyo yakapfava uye inofema. Uye iyo stenght uye elogation inochengeta pane yakanaka nhanho.
Mvura inodzivirira isina ruchimbo
Mvura inodzivirira isina ruchimbo.Inoshandisa kune yekurapa pamubhedha pepa uye kuraswa manities, semuenzaniso kuvhiya masks, kuraswa kushanda gweji.Tine hukuru hwakawanda hwekuti vatengi vasarudze. Uye ruvara uye gramu.Nguva dzose kurongedza muhomwe kana carton.